प्रदेश १ मा कृषि उत्पादनको स्थिति कस्तो छ ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
प्रदेश १ मा कृषि उत्पादनको स्थिति कस्तो छ ?
२२ कार्तिक २०७८, सोमबार १५:१६
कृषि बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ०.१ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समग्र कृषि बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ०.१ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि बालीहरुको उत्पादन ०.८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रमुख खाद्य बालीबाहेकका अन्य बालीहरुको उत्पादनमा कमी आएकाले समग्र कृषि बालीहरुको उत्पादन घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धान उत्पादन २.४ प्रतिशत, मकै उत्पादन १.२ प्रतिशत तथा गहुँ उत्पादन ४.१ प्रतिशतले बढेको छ भने कोदोउत्पादन १.३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा तरकारी उत्पादन १.२ प्रतिशत र फलफूल तथा मसला उत्पादन ५.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दूध उत्पादन २.१ प्रतिशत, अण्डा उत्पादन ८.० प्रतिशत र माछा उत्पादन ६९.१ प्रतिशतले बढेको छ भने मासु उत्पादन ०.५ प्रतिशतले घटेको छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रदेश तथा संघीय सरकारको अनुदानमा पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको तथा माछाका भुराहरुको उत्पादन तथा वितरणमा बढोत्तरी भएका कारण माछाको उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा काठ उत्पादन ३९.३ प्रतिशत, दाउरा उत्पादन १२.७ प्रतिशत र औषधिजन्य उत्पादन ४५.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण प्रदेश नं. १ का डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटान गर्ने स्वीकृति नदिएको तर समीक्षा वर्षमा निजी वनको काठ कटानका लागि स्वीकृत दिएकाले काठ उत्पादन बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २.१ प्रतिशत र कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफल १.१ प्रतिशतले बढेको छ भने खेती गरिएको क्षेत्रफल ०.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कृषि कर्जा ४१.७ प्रतिशतले बढेकोछ । २०७८ असार मसान्तमा कुल प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश ९.८ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।